Ogaden News Agency (ONA) – Wariyaha OT uga soo warama Jigjiga oo xaqiijiyay baxsadka Hawaarinta
Wariyaha OT uga soo warama Jigjiga oo xaqiijiyay baxsadka Hawaarinta
Posted by ONA Admin	/ October 21, 2013
Sida ay ku warantay shabakadda OgadenToday ciidan gaadhay 150 ayaa ka baxsaday Hawaarinta oo la’isugu keenay Jigjiga. Dhalinyaradan baxsatay oo sida ay shabakadda ku soo warantay qaarkood la soo qabqabtay oo dib loogu soo celiyay ayaa xabsiga loo taxaabay.
Baxsadka Hawaarinta ayaa waayadanba socotay iyagoo ka gadoodsan arimaha ay ka mid ka yihiin laynta shacabka, daryeel la’aan haysata iyo reeraysi ay koox gaar ah maamushaan dhaqaalaha la siiyo ama shacabka laga boobo iyo waliba darajooyinka oo la siiyo reer gaar ah sida ay sheegeen qaar ka soo baxsaday oon horey u wareysanay.
Waxay kaloo OgadenToday ka xog-warantay weerar culus oo xalay lagu qaaday garoonka dayaaradaha Qabridahare iyo xero ciidanka cadawga ay ku leeyihiin magaalada. Weerarkaa oy ku sheegtay shabakadda inuu hadafkiisu ahaa wafti ka socda gumaysiga Itobiya oo la filayay inuu ka soo dago garoonkaa.
Waxaan horey idiinla socodsiinay in CWXO heegan ay ku jiraan si looga hortago qorshaha loo soo diray waftigan ee cadawga uu maagan yahay. Faahfaahin dheeraad ah ayaan idinla socodsiin doona waqtigeeda.